Mana Oromoo Swiss: Ibsa ABO - Haasaa Nagaa Murnna Jijjiiramaa wajjin irratti
Ibsa ABO - Haasaa Nagaa Murnna Jijjiiramaa wajjin irratti
Murnnoonni lameen maqaa ABOn sosso’an – Shanee Asmaraa fi Murnna jijjiiramaa – waamicha keenyaaf owwaachu isaaniif galata qabsoo galchinaaf. Qaamota kana lamaan wajjiin maree jalqabnnee jiraachuu keenya isinniif ibsinna. Ha ta’u malee, yeroo ammaa kanatti dhaabin keenya murnoota kana lameen wajjiin dhimma kana ilaalchisee murtii irra gahe akka hin qabnne asumaanuu isin hubachiifnna.
Abdiin keenya, mareen itti jirru Kaayyo ganamaa jalatti ABO dhinsee fi humnneessee QBO jabeessa kan jedhu. Abdii kana dhugoomsuufis qooda nurraa barbaachisu hunda gumaachuu itti fufnna. Ha ta’u malee, dhimmi dhaabicha jeeqee adda bahiinsa fide addaddummaa ilaalcha siyaasaa waan ta’eef furmaatin isaa maree bali’aa fi bilchinaan qabamuu gaafata. Kan ummatin Oromoo nurraa eegus kanuma. Dhimmi kun, dhimmaa fedhii fi hamilee ummata keenyaa ilaallatu waan ta’eef, kan yeroof ittiin tumsa horaachuu fi ykn gumaacha funaannachuuf jecha soba dhugaa fakkeessanii uummaticha ittin gowwomsan ta’uu hin qabu. Ummatin keenya kan nurraa eegu dhugaa itti himuu waan ta’eef, qaamonni siyaasaa Oromoo kanaan beekkaman hundi akka gochaa kana irraa of qusatan kabajaan gaafanna. Kannen dhara (soba) facaasuun qaamota mareetti jiran walitti muufachiisanii sochii kana gufaachiisuu yaalan yoo jiraatan akka isaan hin milkoofinnes asumaan hubachiifnna.
posted by Mana Oromoo Swiss @ 2:57 PM 0 comments